Wiyisha cad ee woqooyiga ayaa ka fadhiisatay mashruuca taranka adduunka ugu horreeya - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Wararka Wiyisha cad ee woqooyiga ayaa ka fadhiisatay mashruuca taranka adduunka ugu horreeya
Wiyisha cad ee woqooyiga ayaa ka fadhiisatay mashruuca taranka adduunka ugu horreeya
Saynisyahanno isku dayaya inay soo celiyaan wiyisha cad ee woqooyiga ee dabargo’a qarka u saaran ayaa ku dhawaaqay Khamiista maanta inay joojinayaan beerista ukunta mid ka mid ah laba tijaabo oo ku lug leh barnaamij taran oo aan hore loo arag.
Isagoo tixraacaya sababaha halista iyo badbaadada, bahda sayniska ee Biorescue ayaa sheegey inay go’aansadeen inay ka fadhiisiyaan kan weyn labada dheddig, Najin oo 32 jir ah, oo ugu deeqi jirtey unugyadeeda ukunta mashruuca hamiga sare leh.
Tani waxay ka dhigantahay in Najin Fatu oo ah wiyisha kaliya ee cad ee woqooyiga dhulku inay ahayd deeq bixiyaha keliya ee barnaamijkan isku dayaya inuu badbaadiyo noocyada sii dabar-go’aya.
“In la miisaamo khataraha iyo fursadaha iyo dhammaan wixii raaca ayaa go’aankaan lagu qaatay iyada oo aan la helin bedel kale,” ayay Biorescue ku sheegtay bayaan.
Laga soo bilaabo 2019, daladda caalamiga ah waxay ururiyeen ukumo ay Najin iyo Fatu ka keeneen si loogu caawiyo barnaamijka taranka oo aan hore loogu tijaabin wiyisha.
Waxay soo mareen hab aad halis u ah oo ay fuliyeen koox khubaro ah oo caalami ah, kuwaas oo suuxinayey muddo ku dhow laba saacadood, ugxantana soo saarayey iyadoo la adeegsanayo farsamooyin qaatay sanado badan oo cilmi-baadhis iyo horumarin ba ah.
Ukunta ayaa diyaarad loogu qaaday shaybaar ku yaal Talyaaniga si loogu bacrimiyo, loo horumariyo loona ilaaliyo, iyadoo la isticmaalayo shahwada laba lab oo wiyilo dhintay oo kala duwan laga kaydiyey.
Bishii Luulyo, daladu waxay ku dhawaaqday inay abuureen saddex uurjiif oo dheeri ah oo ku siyaadsan kuwii hore, taasoo wadarta guud ka dhigaysa 12.
Laakiin uurjiifyada wax-ku-oolka ah dhammaantood waxay ka soo jeedaan wiyisha yar, barnaamijkuna ma aha mid halis ah in kasta oo daryeel la sameeyay, ayuu yiri Jan Stejskal, oo ah agaasimaha mashaariicda caalamiga ah ee Safari Park Dvur Kralovs, oo Najin ku dhalatay 1989.
“Waxay sii ahaan doontaa qayb ka mid ah barnaamijka, tusaale ahaan iyada oo bixinaysa oo shaybaarka siinaysa unugyada asliga ah, oo lagu samayn karo dib u beerid,” ayuu yiri Stejskal.
Fatu iyo Najin midkoodna ma awoodo inuu uurka ku sido muddo dheer, sidaa darteed hooyooyinka ku-meelgaadhka ah ee uurjiifka ayaa laga soo xulan doonaa wiyisha cad ee koonfurta.
Barnaamijka taranku waa fursadii ugu dambaysay ee xayawaanka haybadda leh lagu badbaadin karo.
wiyilkii ugu dambeeyey, oo lagu magacaabi jirey Sudan, wuxuu ku dhintay Ol Pejeta Conservancy Kenya 2018, halkaas oo Najin iyo Fatu ay ku hoos nool yihiin waardiye 24-saac ah.
Wiyisha ayaa aad u yarayd ugaadhsiga dabiiciga ah ee la ugaadhaa laakiin tiradoodu waxay ku baaba’ay ugaadhsiga foolkeeda ilaa 1970-meeyadii.
Wiyishu waxay meeraha ku nooleeyd 26 milyan oo sano waxaana lagu qiyaasaa in ka badan hal milyan oo wiyil ahi inay ku noolayd duurka badhtamihii qarnigii 19aad.
Previous articleDhalinyarada u ooman xoriyadu waxay hurinayaan isku dhacyada Saxaraha Galbeed
Next articleSouth Africa: Eight Nigerian con suspects arrested in Cape Town